Madaxii Dhaqaalaha iyo Loojistikada Al-Shabaab ee gobolka Mudug oo la qabtay | SAHAN ONLINE
Madaxii Dhaqaalaha iyo Loojistikada Al-Shabaab ee gobolka Mudug oo la qabtay
Hawlgal ay si wada jir ah u fuliyeen sirdoonka Galmudug iyo Puntland ayaa lagu qabtey madaxii dhaqaalaha iyo Loojistikada al-Shabaab ee gobolka Mudug oo in muddo ah la raadinaayey. warkan waxaan ka soo xiganey ilo lagu kalsoon yahay oo ka gaabsadey in la soo xigto.
Cabdirisaaq Tahliil oo dhex fadhiya Maxkmadda garoowe 2013
Cabidrisaaq Tahliin Ina Caloolgeel madaxii dhaqaalaha iyo Loojistikada ee al-Shabaab ayaa la xaqjiiiyey in la qabtey isaga iyo saddex qof oo kale, waxaana lagu qabtey meel kamid ah gobolka Mudug.
Ninkan ayaa kamid ahaa kuwii lagu eedeeyey in ay ka danbeeyeen dagaaladii dhex-marey Galmudug iyo Puntland, dilal aad u badan oo ka dhacay Waqooyiga Gaalkacyo iyo weliba qaraxii suuqa Dayax ee Gaalkacyo.
Tahliil oo qaraxyo lagu qabtey sanadkii 2012
Maamulkii hore ee Puntland ee uu Madaxweynaha ka ahaa Cabdiraxmaan Faroole ayaa gacanta ku dhigey Tahliil iyo nin kale Nofeember 17, 2012 isaga iyo in kale, waxaana lagu soo qabtey iyaga maleegaya qaraxyo, kadibna waxaa lagu xirey Garoowe, waxaana lagu xukumey dil toogasho ah sanadkii 2013-ka. Dhalinyaro ka soo jeeda Galmudug ayaa afduubtey laba ardey oo ka soo jeeda deeganada Puntland, iyaga oo doonaya in Tahliil la soo daayo. Madaxweynaha Puntland Cabdiweli Cali Gaas maamulkiisa ayaa bishii Diseembar 2014 xabsiga ka sii daayey Tahliil si loogu beddesho ardeyda afduubka loo qabsadey. Tan iyo markii la soo daayey Tahliil waxaa halkoodi ka bilowdey dilalkii Gaalkacyo Waqooyigeeda ka socdey.
Duqeyntii dhanka cirka ee ka dhacdey banaanka Gaalkacyo sanadkii 2016 ee ay fuliyeen ciidamada cirka ee Maraykanka ayaa lagu bartilmaameedsadey Cabdirisaaq Tahliil iyo Nuur Maalin-guur sida maamulka Puntland sheegey. Maamulka Galmudug ayaa sheegtey in ciidanka la duqeeyey ay ahaayeen kuwooda ee aysan ahayn al-Shabaab.
Qabashada Tahliil waxaa saxaafadda u xaqiijiyey walaalkii MAxamed Xuseen Tahliil oo ka tirsan Baarlamaanka Galmudug, waxaana uu ku eedeeyey Puntland in ay ka danbeysey Maraykankana la kaashatey xariga Cabdirisaaq Xuseen Tahliil.
Cabdirisaaq Tahliil oo ka dhex hadlaya shir loo qabtey si loogu bari yeelo, waxaa shirkaas ka soo qaybgalay Wasiiro iyo Xildhibaano ka tirsanaa Galmudug / Okot 2016
Cabdirsaaq Tahliil ayaa markii ay soo baxdey in lagu diley duqeyntii Gaalkacyo banaanka is keenay, waxaana uu shir saxaafaeed ku qabtey gudaha Gaalkacyo isaga oo loogu yeerayo ganacsade. (Akhri hobyonet)
Warar Horseed Media soo gaarey ayaa sheegaya in ciidamada sida gaarka ah ee u tababaran ee PSF oo kaashanaya Galmudug ay gacanta ku soo dhigeen Cabdirisaaq Tahliil Caanogeel.
Laamaha amniga ayaan weli ka hadlin warka saxaafadda soo gaarey ee qabashada Tahliil.